समाज खबर – Page 335 – rastriyakhabar.com
२१ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काज सरुवा
काठमाडौ,३० वैशाख । गृहमन्त्रालयले २१ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काज सरुवा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सोमबार गरेको निर्णयअनुसार स्याङजाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णकुमार राउतलाई कास्की, विरेन्द्र कमार यादवलाई सप्तरी , दिनेश भट्टराई दाङ,भगीराज इङनाम धनकुटा, सुर्दशन प्रसाद ढकाल सुनसरी र अनिल..
हारेकाले नपाउने भएपछि वरिष्ठ नेताको सभासद बन्ने सपना चकनाचुर
काठमाडौं,३० वैशाख । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभामा प्रत्यक्ष चुनाव हारेका र समानुपातिक सूचीमा परेकालाई २६ सदस्यमा मनोनीत नगर्न परमादेश गरेपछि विभिन्न दलका वरिष्ठ नेताकै सभासद बन्ने सपना चकनाचुर भएको छ । मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने २६ सभासदमध्ये कांग्रेसलाई ९, एमालेलाई ८, एकीकृत नेकपा..
अनुमतिबिनै अमेरिकी पाइलटले उडाए चिनियाँ जहाज
काठमाडौं,३० वैशाख । चिनियाँ जहाज एमए ६० उडाएर आएका दुई अमेरिकी पाइलटसँग त्यो जहाज उडाउने योग्यताको प्रमाणपत्र (टाइप रेटिङ) नभएको पाइएको छ। चीनबाट जहाज लिएर आएका एअर ट्रान्सपोर्ट पाइलट लाइसेन्स (एटीपीएल) नम्बर २२९०७४० का पिटर जोन पार्कर र नम्बर २२८४३६० का अर्का पाइलट दुवैसँग एमए ६० को रेटिङ प्रमाणपत्र..
आईपिएल क्रिकेट अन्तर्गत शीर्ष दुईको भिडन्त हुँदै
बैशाख,२४ काठमाडौँ । इन्डियन प्रिमियर लिग आईपिएल क्रिकेटमा आज शीर्ष दुई स्थानमा रहेका चेन्नेई सुपर किंग्स र किंग्स इलेभेन पञ्जावबीच प्रतिस्पर्धा हुदैछ । प्रतियोगितामा सात खेल खेलेको चेन्नेई १२ अंकका साथ शीर्ष स्थानमा छ भने चेन्नेई भन्दा एक खेल कम खेलेको पञ्जावको १० अंक छ । आजको खेलमा जीत हात पार्दै..
सभासद् नदिएपछि महन्थ ठाकुरको गाडी कब्जा
काठमाडौं, २३ बैशाख । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले चढ्ने गाडी उनकै पूर्वसहयोगी (पिए) ले कब्जा गरेका छन् । तमलोपाबाट समानुपातिकमा सभासद् नपाएपछि उनका पूर्वपिए सञ्जय ठाकुरले गाडी कब्जा गरेको स्रोतको भनाई छ । संविधानसभा निवाृर्चन बेला तमलोपाले बा. १० च. ८६३७ नम्बरको टाटा सफारी..
विश्वको सबैभन्दा बढी तर्साउने ठाउँका फोटोहरु हेर्नुहोस
हामी भुत-प्रेतमा विश्वास राख्छौं ? पक्का पनि हामी मान्दैनौं कि यो संसारमा तर्साउने कुरा पनि छन् जो प्रेतात्मा हुन् । पहिले -पहिले यस्ता तर्साउने घटनाहरु धेरै हुन्थे । बिस्तारै मान्छे प्रविधिमा भर पर्न थालेपछि त्यस्ता तर्साउने घटना घट्न छाडेको बताइन्छ । यो कुरा नेपाली समुदायको हो, हामी तर्साउने..
अपरकर्णाली राष्ट्र हितमा बनाइन्छ : प्रम
काठमाडौँ,२३ वैशाख । प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले ‘अपरकर्णाली’ परियोजनालाई राष्ट्रहितमा बनाइने बताएका छन् । मंगलबार विहान आफ्नै निवास बालुवाटारमा कर्णाली जलाधार क्षेत्रका बासिन्दा र सरोकारवालासँग सो कुरा बताएका हुन । विवादित अपरकर्णाली परियोजना राष्ट्रहित विरुद्धमा भएको भन्दै विरोध गर्दैै..